Fanarenana rafitra fanimbana rakitra - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>mg>Fanarenana rafitra fanimbana rakitra
Fanarenana rafitra fanimbana rakitra
Ahoana ny fanitsiana ny olan'ny formatting rehefa tsy afaka misokatra ny kapila mafy finday?
Mandosira ny fomba hanamboarana ny sezika efa niasa? Ny fomba tsotra indrindra dia ny format. Tsotra ny fandefasana format, azonao atao ny mampiasa formating Windows, azonao atao koa ny mampiasa Bplandatarecesy operation. Na izany aza, alohan'ny handrindrana, dia mila manamarina ianao fa efa niverina ny angon-drakitra very!
Tsindrio ny bokotra mitondra ny solosaina misolo tena ny kapila mafy finday ao anaty solosaina, ary avy eo fidio ny safidy "Format"; aorian'izany, tsindrio ny bokotra "Start" eo amin'ny varavarankely izay nivoahana.
Ny fiara mafy ho an'ny finday dia tsy hanokatra ny fisisihan'ny fampidirana
Antony mahazatra ho an'ny fanamoriana finday tsy fanokafana fampidirana avy hatrany
Antony finday Betsaka ny antony mahatonga ny kapila mafy ho an'ny format haingana, izay mety tsy fahombiazana lojika na tsy fahampiana ara-batana. Androany, ny tonian-dahatsoratra dia mamintina ny sasany amin'ireo antony mahazatra kokoa, ary manome hevitra ny rehetra mba hahitana ny antony sy ny vahaolana.
fahasimban'ny rafitra fisie file: ny rafi-pandrafitra dia fomba iray fitehirizana sy fikarakarana ny angon-drakitra, ary manome fomba iray ahafahana miditra ny angon-drakitra ao anaty. Ny rafitry ny rakitra dia mizara toerana fitahirizana kapila amina vondrona maromaro, ary tompon'andraikitra amin'ny firaketana ireo rakitra ireo natokana ho an'ireo tahiry ireo. Raha simba ny rafitra fisie dia tsy afaka miditra amin'ny angona ilay fizarana. Koa satria ny fanamboarana ny endrika dia afaka manangana ny rafitry ny rakitra, rehefa simba ny fisarahana dia matetika ilay rafi-pitondrana dia manery fa tokony hamboarina.
Type system system fileed notohanana: Tsy manohana ny systeme de file du hard hard disk ny solosaina. Ohatra, raha mampiasa kapila karazana rakitra Linux toa ny EXT4 ny kapila mafy finday dia misy ifandraisany amin'ny solosaina Windows. Hamporisika ianao hampisy endrika. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mametraka ny kapila mafy finday any amin'ny tontolo Linux mba hamaky ny data, na azonao atao ny mampiasa ny rindrambaiko Bplandatarec ahy hamaky sy hanoratanao ny fizarazarana EXT4 eo ambany Windows.
Tsy ampy ny famatarana herinaratra ho an'ny port USB: ny finday mafy, toy ny kapila mafy mekanika mahazatra, dia miantehitra amin'ny kapila anatiny ho an'ny famakiana data sy fanoratana, ary ny fepetra takian'ny herinaratra dia somary avo lenta. Raha tsy ampy na tsy miorina ny herin'aratra an'ny port USB dia misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny mahazatra sy ny fanoratana ary hiteraka fikorontanana ny angona.
Fampandrenesana mety: Maro ny mpampiasa tsy tsindrio ny safidim-pifandraisana azo antoka alohan'ny hanesorana ny kapila mafy finday, ary indraindray esorina mivantana ny kapila mafy finday rehefa tsy vitan'ny rafitra ilay famakiana sy fanoratana. Mety hitarika fampahalalana rakitra rakitra tsy misy, tsy hita na simba.
Sehatra ratsy: Hard sehatra ratsy dia faritra amin'ny kapila izay tsy azo tanterahina ny famakiana sy fanoratana. Ny sehatra ratsy dia hitondra olana isan-karazany, toy ny partition tsy mety misokatra, ny partitions very, ary ny fihenan'ny kapila mafy. sy ny sisa.
Raha ny kapila mafy finday dia amporisihana hanao format, raha manan-danja kokoa ny angon-drakitra, aza ampirimina ny fisarahana, ary aza manao fisafoana amin'ny disk. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fanarenana ny angon-drakitra. Araho ny dingana etsy ambony amin'ny dingana ho sitrana ireo rakitra very. Raha betsaka ny ratsy ratsy ny kapila mafy finday ary tsy afaka mivezivezy ny rindrambaiko, azonao atao ny mifandray amin'ny ekipa manam-pahaizana Bplandatarecovery raha misy vahaolana.
PreFizarana fizarana aorian'ny fisafidianan'ny Ghost
NextAvereno averina ny angon-dranon-kapila alohan'ny hisian'ny famoahana azy